လှုပ်ရှားနေသော မိုးကောင်းကင်: နိုးနေတဲ့ည
အမှောင်ကမ္ဘာထဲ ။ ။
ကျနော်ရဲ့ "နှစ်သစ်နှင့် တွေဆုံခြင်း" ကဗျာ commented တွင် "ဘယ်သူက နှစ်ဆန်းတစ် ရက်မှာ ဖြန်းတာတုန်း.."လို့ မေးလာတဲ့ အမေးကို ဤကဗျာဖြင့် ဖြေလိုက်ပါရစေ။
တင်ပြပေးသူ ငြိမ်းစု (တင်ပြချိန်) 1:05 AM
အမှောင်ကမ္ဘာထဲ ။ ။"
ဒါကြောင့် American Vision ကို သာ ကြွခဲ့ပါတော့ဗျို့။ :D :)
ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကား tea ကဦသွားတယ်။
တို၊ ထိ လေးမို့ .....
Ko Tea yay! Nice comment!!!hehe! funny! anyway, it'sanice poem!